दीपिका पादुकोण बारे सनसनीपूर्ण खुलासा, ह्वाट्सएप ग्रुपकी एडमिन नै दीपिका - Himali Patrika
दीपिका पादुकोण बारे सनसनीपूर्ण खुलासा, ह्वाट्सएप ग्रुपकी एडमिन नै दीपिका
हिमाली पत्रिका ९ असोज २०७७, 7:43 pm
नायिका दीपिका पादुकोणको नाम ड्र’ग्सको मुद्दामा जोडिएपछि उनको बलिउड करिअर र ब्रान्डसँगको सहकार्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने टिप्पणी सुरु भएको छ । बलिउडका ट्रेड पण्डितहरु दीपिकाको करिअरलाई यसले ठूलो असर नगरेपनि उनको ब्रान्ड भ्यालू भने घटाउने बताउँछन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार, दीपिकाको नाममा करिब ६ सय करोड लगानी भैरहेको छ । जसमा २ वटा चलचित्र र ३३ वटा ब्रान्ड जोडिएका छन् ।
दीपिकाले निर्माता मधु मन्तेना र शकुन बत्राको चलचित्रमा काम गर्ने तयारी गरेकी छिन् । यस्तै, एउटै विज्ञापनबाट ८ देखि १२ करोड लिने दीपिकासँग ३३ वटा ब्रान्ड जोडिएका छन् ।
बलिउडका ट्रेड एनालिस्ट तथा वितरक राज बंसलले भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै दीपिकाको करिअरमा यसले ठूलो असर पार्ने बताएका छन् । यतिबेला, सबैजना मानिस सेलिब्रिटीको पछि लागेको भन्दै यसले चलचित्रको कलेक्शनमा असर गर्ने बताएका छन् ।
वाट्सऐप च्याटको वास्तविकता पुष्टी गर्न नै बाँकी रहेकाले पनि दीपिकाले जेल नै जानु नपर्ने तर्क केही बलिउड पण्डितहरुको छ । तर, ‘ओम शान्ती ओम’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी यी सुन्दरीलाई ड्र’ग्सको मुद्दाले करिअरमा भने ठूलो असर गर्ने देखिएको छ ।
ह्वाट्सएप ग्रुपकी एडमिन थिइन् दीपिका ! ग्रुपमा अरु को–को थिए ?
पछिल्लो समय ला’गु औषध विवादमा फसेकी बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको बारेमा सनसनीपूर्ण खुलासा भइरहेको छ । जानकारीअनुसार दीपिका त्यो ह्वाट्सएप ग्रुपकी एडमिन थिइन् जुन ग्रुपमा ड्र’ग्सबारे कुरा हुन्थ्यो र चाहिनेले आफूलाई चाहिएकोजति माग गर्थे ।
स्वयं दीपिकाले २०१७ मा त्यो ग्रुपमै ड्र’ग्सको माग गरेकी थिइन् । बताइएअनुसार त्यो ग्रु’पमा जया शाह र करिश्मा प्रकाश पनि थिए । यस्तोमा अब दीपिका झनै कठिनाइमा फस्न सक्छिन् ।
एनसीबीले शनिबार दीपिकालाई सोधपुछको लागि बोलाएको छ । क्वान कम्पनीकी म्यानेजर करिश्मा प्रकाशसँग भने शुक्रबार नै सोधपुछ गरिएको छ । यही बीचमा ड्र’ग्स’बारे चर्चा हुने ग्रुपकी एडमिन नै दीपिका भएको खुलासा हुनुने कैयौं प्रश्न उठाएको छ ।
ग्रुपमा अरु को-को थिए भन्ने अहिले खुलासा गरिएको छैन । यसले बलिउडका चर्चित अभिनेत्रीहरु यो केसमा फसेको मात्र नभइ उनीहरुको सक्रिय भूमिका भएको देखाएको छ । यो खुलासासँगै एनसीबीले दीपिकामाथि झनै कडाइका साथ अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
यसअघि दीपिकालाई शुक्रबार नै सोधपुछ गर्ने तय थियो तर पछि उनलाई शनिबारको समय दिइयो । शुक्रबार रकुल प्रित सिंह र करिश्मा प्रकाशसँग सोधपुछको समय तय गरियो । रकुल प्रितसँग सोधपुछ भइरहेको छ र करिश्मा प्रकाशसँग पनि सोधपुछको सिलसिला सुरु हुन्दैछ । दीपिकासँगै सारा अली खान र श्रद्धा कपूरसँग पनि एनसीबीले सोधपुछ गर्नेछ । सारा र श्रद्धाको लागि पनि शनिबारकै समय तय गरिएको छ ।